Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ka Soo Baxa Qaarada Yurub - Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ka Soo Baxa Qaarada Yurub
Suuqa kala iibsiga ayaa haatan xiran laakiin waxaa soo dhow inuu furmo suuqii kala iibsiga xagaaga taasoo keeneysa inay badato xanta la xiriirta suuqa kala iibsiga.
Hadaba waxaan eegeynaa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ee lagu qoray wargeysyada ka soo baxa Spain, France, Italy, Portugal iyo Germany.
Sida uu ku warmayo wargayska Marca ee Spain ka soo baxaa, kooxda AS Monco ayaa iska soo diiday dalab dalab 64 milyan gini ah oo u dhigma 75 milyan oo euros oo ay Liverpool ku doonaysay xidiga Real Madrid diirada u saaran ee Kylian Mbappe. Marca ayaa ku warantay in Monaco ay doonayso in 86 milyan oo gini oo u dhiganta 100 milyan oo euros ay ku doonayso madaxa 18 jirkan ree France.
Dhinaca kale wargayska kale ee Spain ka soo baxa ee Don Balon ayaa sheegay in Real Madrid ay rajaynayso in ay la soo wareegi doonto Eden hazard suuqa xagaagan taas oo u gogol xaadhi doonta in Chelsea ay la soo wareegto xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Marco Verratti waxayna Real Madrid doonaysaa in ay Hazard ay uga horayso Barcelona.
Manchester United ayaa heshiis la sii gaadhay da’yarka aadka loo qiimeeyo ee Arnau Puigmal oo ka tirsan kooxda Espanyol sida uu ku waramay wargayska Sport. 16 jirkan ayaa loogu codeeyay ciyaartoyga ugu qiimaha adan tartankii Mediterranean International Cupka.
Neymar JR ayaa asxaabtiisa u dhaw u sheegay in uu jeclaan lahaa in uu Real Madrid ku biiri lahaa halkii uu Barcelona kaga biiray sanadkii 2013 kii iyada oo xidiga ree Brazil sidoo kale lala xidhiidhinayo Manchester United sida uu ku waramayo wargayska Don Balon.
Manchester United ayaa dalab 34 milyan oo gini ah una dhigma 40 milyan oo euros ka gudbisay xidiga khadka dhexe ee kooxda AS Roma ee Radja Nainggolan. Xidiga heer caalami ah xulka qaranka Belgium ayaa waqti dheer bartilmaameed u ahaa Chelsea balse Mourinho ayaa doonaya in uu 29 jirkan ku soo xoojiyo kooxiisa sida uus shaaca ka qaaday wargayska Gazzetta dello Sport.
Dhinaca kale Manchester United ayaa doonaysa saxiixa gool dhaliyaha kooxda Napoli ee Dries Mertens iyada oo Mourinho uu doonayo in musiibada horyaalka Premier Leaque-ga xili ciyaareedkan kaga habsatay uu kaga baxo laakiin heshiiska Mertens ee Napoli ayaa dhacaya 2018 waxayna doonaysaa in ay ka saxiixato heshiis cusub oo gaadhaya 2020 sida uu ku waramay wargayska Calciomercato.
Inter Milan ayaa kooxaha Arsenal iyo Juventus kula soo biirtay tartanka loogu jiro 22 jirka khadka dhexe ee Corentin Tolisso. Da’yarkan ree France ayaa 14 gool soo dhaliyay xili ciyaareedkan halka uu sameeyay 6 gool cawineed waxaana doonaya kooxaha Inter Milan, Arsenal iyo Juventus sida uu ku waramayo wargayska Gazzetta dello Sport.
Real Madrid ayaa xidiga kooxda AS Monaco ee Bernado Silva u diyaarsatay in uu noqdo badalka tooska ah ee James Rodriguez oo doonaya in uu dhawaan ku biiro Manchester United sida uu ku waramay wargayska Le10Sport. Real Madrid oo Eden Hazard doonaysa ayaa maanka ku haysa sida ay Chelsea ugu adagtahay xidiga ree Belgium basle Silva ayay doonayaa in uu noqdo badalka James.
Kooxda Marseille ayaa doonaysa in ay heshiis amaah ah Chelsea kagala wareegto difaaca dhexe ee Kurt Zouma. 22 jirkan ayaa qayb ka ahayn shaxda kowaad ee Conte waxayna sidoo kale Blues doonaysaa in Zouma uu ku baxo amaah si uu dib ugu soo dhiso qaab ciyaareedkiisii uu dhaawacu dishooday waxanaa warkan qoray wargayska caanka ah ee L’Equipe .
Xidiga kooxda Chelsea ee Willian ayaa sheegay in uu xidhiidh khaas ah la leeyahay Jose Mourinho isla markaana ay macalinka ree Portugal saaxiibo dhaw yihiin. Mourinho ayaa doonaya in uu Willian keensado Old Traffrod waxaana Man United lala xidhiidhinayay xidiga ree Brazil tan iyo xagaagii hore waxaana warkan qoray wargayska Portugal ee A Bola.
Manchester City ayaa doonaysa in ay laba jibaarto dalabkii ay ku doonaysay labada xiidg ee kooxda Sporting Lisbon ee Gelson Martins iyo William Carvalho laakiin kooxda ree Portugal ayaa dalbanaysa 90 milyan oo eurso si ay heshiisyadani u dhacaan sida uu qoray wargayska Record.
Ugu danbayn wakiilka Yaya Toure ee Dimitri Seluk ayaa sheegay in Bayern Munich ay tahay kooxda ku haboon heerka Toure haddii ay xidiga ree Ivory Coast ka baxo kooxdiisa Mnachester City xagaagan sida uu qoray wargayska Sport Bild.